I-Shredder yegatsha | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba I-Shredder yegatsha
Ukukhula kwamamithabhele amnyama e-dacha
Amabelebhisi amnyama - amameriyamu, isihlobo esiseduze semameriyamu omhlophe. Izihlahla azifani nje nombala kanye nokunambitheka kwamajikijolo (omnyama kunomnandi futhi omnandi), kodwa nokuthi iqiniso lokuthi i-silkworm ikhetha amaqabunga amancane ombhalibhele omhlophe. I-Black Mulberry: Incazelo I-Mulberry imithi iyalinywa ukuze izalise izibungu ezifake izimpondo zazo.
Ukwandisa ikhono le-motoblock engadini yakho
Uma usondela ngokungathí sina futhi enesibopho sokusebenza ensimini, ngokushesha uzofika esiphethweni sokuthi udinga umsizi onokwethenjelwa - imishini ekhethekile. I-motorblock, okuyidivayisi ehlukahlukene, inenzuzo enkulu. Ehlobo isebenza nenhlabathi, ebusika isetshenziselwa ukusula iqhwa, futhi lingasetshenziswa ukuthutha izimpahla ezihlukahlukene.
Indlela yokwenza i-chopper engadini yenza wena ngokwakho
I-shredder, noma i-grinder yegatsha, iklanyelwe ukusiza ukunakekelwa kwe-dacha, ukulondoloza isikhathi namandla, futhi ukuxazulula inkinga yokulahla amagatsha angadingekile futhi omile ngemuva komqhele "wokukhanyisa" nokususa indawo. Idivayisi inesidingo esikhulu emakethe, ngakho-ke namuhla ingatholakala kunoma yisiphi isitolo sempahla engadini neyadini.
Utamatisi ezihlukahlukene pink Korneevsky: incazelo kanye nezici
Incazelo, ukukhiqiza okucacile kanye nezici ze-Oryol calico izinhlobo zezinkukhu
Izinhlobo ezingama-raspberries Kirzhach: incazelo yezinhlobonhlobo namathiphu wokukhula